MEEL HOO DOONAYSA HADAL WAX KAMA TARO. • Horseed Media
You are here: Home / Articles / MEEL HOO DOONAYSA HADAL WAX KAMA TARO.
March 1, 2019 - By: HORSEED STAFF
Waxaad moodaa in kiiskii jidgooyada, afduubka, kufsiga iyo dilka iskugu jiray ee Caasho Ilyaas Aadan lagula kacay ay bulshada hal doorkeeda kala duwani sida oday dhaqameedyada, culimada, golaha fulinta, xeerbeegtida iyo garsoorka dowladda Puntland qolaba si uun oo aragtidooda ku wajahan uga fal cesheen.
Si kastaba oo aragtida qolo kastaa ay tahay, kiiskan iyo kiisaskii ka horeeyayba oo gabdhaha Soomaaliyeed lagula kacay waxaa sal u ah caddaalad darrada iyo ducifinimada nidaamka awoodda fulinta ee gayigeena ka jira muddooyinkii danbe, Puntland iyo Soomaaliya guud ahaan, iyadoo aynu ognahay danbi kastaa oo dhaca haddii aan la marin caddaalad danbiilihii gaystay oo mar marsiinyo loo doon doono asbaabihii ku gadaamnaa ( hareeraysnaa) danbigaas loo gaystay dhibbanahii ay noqonayso in caddaaladii iyo sharcigii umadda kala ilaalinayay dhulkan Alle nagu abuuray si nabad ah ugu noolaano ay qolaba sida hawadeeda iyo aragtideedu tahay ay wax u fasiri doonto, dabadeedna sida haddaan Soomaali nahay masiibada dhan kasta nagaga hareeraysan aysan cidina ka badbaadi doonin.
Fiiri waxaa la laayaa culimada, isimada, waxgaradka, waxaa la afduubaa, kufsadaa, dabadeedna la dilaa hablaha. Waxaa la xalaashaday wax Alle wixii Ilaahay muslimiinta uga digay dil, jidgooyo, boob hanti umadeed, fisqi, ribo, caddaalad daro, ku taajirid xoolo masaakiineed, dhiig miirasho, raashin iyo daawooyin tayo liita oo lagu tijaaraysto iyo ugu danbayn hay’adii fulinta iyo garsoorka iyo danbi baarista oo aan jirin, hadday jiraana aan ahayn wax tilmaaman wax qabadkoodu.
Haddaba waxaas oo dhib ah oo jira waxaa dawo u ah in aynu la nimaano dib u noqosho xagga Alle si aynu dhammaan ugu hoggaansano sharciga iyo nidaamka.
Madaxwayne Dani waxa uu maanta joogaa boos uu ku isticmaali karo awooddiisa dowladnimo isaga oo ka bilaabaya in uu tayaysiiyo hay’adihiisa ammaanka (ciidanka) iyo garsoorka si uu u soo cesho nidaamkii awoodda fulinta oo ah hannaanka danbiilayaasha iyo danbiyada dhacaya lagaga hortagi karo oo kaliya.
Micnuhu maaha in mushaarkooda uun labaxsho ee waa in loo idmadaa shaqooyinkaas dad ehel u ah aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaan si lagula xisaabtamo.
Qofka hoggaamiyaha ah marku uu fulinayo caddaaladda go’ aanka uu qaadanayo waa in uusan ahayn mid laba labooba waayo go’aanada qaarkood, khaasatan kuwa lagu ilaasho nafta, maalka iyo cirdiga qofka waa kuwo masiiri ah oo jiilal iman doona nololi ugu jirto.
Nabigeena calayhu salaatu wasalaam markii gabadhii wax xadday loo keenay kiiskeeda oo rag waawayn oo saxaabada ka mid ah isku dayeen in ay uga shafaaco qaadaan iyagoo u sii maraya saxaabi kale, jawaabtii nabigeena suuban waxay ahayd mid uu ku ilaalinayay caddaalada iyo fulinta sharciga isagoo nabigu sallalaahu calayhi wasallam u caddeeyay haddii kiiskaas lagu soo oogi lahaa gabadhiisa Faadumo ay sharciga mari lahayd.
Si lamid ah sidaas, kiiska Caasho oo runtii ahaa kiis dhaca kii ugu foosha xumaa gayigeena waayo waxa uu isugu jiray falal kala duwan oo marnaba qof beer daqnadaa uu ku jiro sinnaba uusan ugu qiil dayi karin asbaabaha ku gadaamnaa kiisas dhacay oo laga yaabo dadka qaar in dhinacyo iskaga shabahaan.
Waxay ahayd gabar saqiir ah , waxaa loo dhigtay jid gooyo iyadoo si nabad ah gurigoodii uga soo baxday, waa la afduubtay, waa la kufsaday, waa la nolol silic dilyeeyay sida ka muuqatay jidhkeeda , ugu danbayn waa la khaarijiyay oo sidii qashinka ayaa bannaanka loo soo tuuray.
Waa tijaabo adag oo shacab iyo dowladba aynu marayno Alla ha noo sahlee.